पिएम कपमा सर्वपक्षीय प्रतिवद्धता | RangashalaNepal.com
नेपालगन्ज, माघ २९ गते
प्रधानमन्त्री कप पाँचौं अन्तराष्ट्रिय महिला भलिबल प्रतियोगितालाई सफल बनाउने नेपालगन्जका बिभिन्न संघसंस्थाले सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता ब्यक्त जनाएका छन ।
सोमबार भएको परामर्श बैठकमा संस्थागत विद्यालय, बसव्यवसायी, उद्योग, राजनिति र खेलकुद क्षेत्रका सम्बद्ध अगुवाले प्रतियोगिताले पश्चिमको क्षेत्रको समग्र विकासमा अग्रणी भुमिका खेलेको भन्दै सहकार्य गर्ने प्रतिवद्धता जाहेर गरेका हुन् ।
आयोजक बाँके जिल्ला भलिबल संघले मिस नेपाल निकिता चन्दकलाई गुडविल एम्बेसडर अनुबन्ध गरी प्रधानमन्त्री कप र राष्टिय खेल भलिबलको प्रवद्र्धन कार्य गरेको छ । प्रधानमन्त्री कपलाई उच्च तहमा प्रवद्र्धन गर्न आवश्यक रहेको हुँदा मिस नेपाललाई अनुबन्ध गरिएको आयोजक संघका अध्यक्ष टीएस ठकुरीले सबैसमक्ष जानकारी गराए । यसबर्षदेखि अन्तर्राष्टिय स्तरमा पुराउन लागेको हुँदा सबैलाई साझेदारी र सहकार्यको हात बढाउन अध्यक्ष ठकुरीले आग्रह पनि गरे । प्रधानमन्त्री कपमा यस बर्षदेखि नेपाल, भारतसहित बंगलादेशको टिम सहभागिता जनाउँदैछ ।
प्रधानमन्त्री कप अन्तराष्ट्रिय महिला भलिबल प्रतियोगिता फागुन ३ देखी नेपालगन्ज कभर्ड हलमा सुरु हुदैेछ । प्रतियोगितामा नेपालको दुइ विभागीय टोली एपिएफ, नेपाल पुलिस क्लब, शिवम न्यु डायमन्ड, पश्चिमाञ्चल, भारतको दुइ टोली देहरादुन र बंगलादेशको टोलीले प्रतिस्पर्धा गर्दैछन ।
ओलम्पियन एवम प्रदेशसभा सभासद सुरेन्द्र हमालले प्रतियोगिताले अन्तराष्ट्रिय स्तरको छबी हासिल गर्दै गैरहेको बताए । उनले भने, ‘नेपालगन्जमा अन्तराष्ट्रिय स्तरको प्रतियोगिता गर्न कठिन छ । धेरै प्रतियोगिता यहाँ भएका छैनन । तर भलिबलका साथीले देखाउनु भएको आटको हामीले कदर गर्नु पर्छ । प्रतियोगितालाई सफल बनाउन हामी सबै सभासद तथा राजनितिक दलको सहयोग रहने प्रतिवद्धता ब्यक्त गर्दछौं ।’
लिग कम नकआउटको आधारमा हुने प्रतियोगिताको विजेताले २ लाख रुपैया, उपविजेताले १ लाख र तेस्रोले ५० हजार रुपैया पुरस्कार पाउनेछन । विभिन्न विद्यागत रुपमा उत्कृष्ट हुने खेलाडीले आर्कषक पुरस्कार पाउनेछन ।
बाँके जिल्ला भलिबल संघ र क्षेत्रीय खेलकुद विकास समितीको समन्वयमा प्रतियोगिता हुनेछ । क्षेत्रीय खेलकुद विकास समिती अध्यक्ष एवम नेपाल भलिबल संघका सचिव भीम ओलीले प्रधानमन्त्री कपले आगामी वर्ष हुने आठौं राष्ट्रिय खेलकुदको तयारीलाई सहयोग गर्ने बताए । उनले भने, हामी एक वर्ष पछि नेपालगन्जमा आठौं राष्ट्रिय खेलकुद गर्ने तयारीमा छौं । त्यसको व्यवस्थापन हाम्रो चुनौति हो ।
तर यस्ता स्तरीय प्रतियोगिता भए हामीलाई आठौं राष्ट्रिय खेलकुद गर्न केहि कठिन हुने छैन । र अहिले हामीसँग सहकार्य गरेको संघ संस्था र ब्यक्तिहरुबाट हामीले आठौं गर्ने टिमको तयारी गर्ने छौं ।
आयोजक बाँके जिल्ला भलिबल संघ अध्यक्ष टिएस ठकरीले प्रतियोगिता भलिबल संघ परिवारको मात्र नभएर सिगो जिल्लाबाँसीको प्रतिष्ठासँग जोडिएको बताए । उनले भने, हामीले सोचेको सपना पुरा भैरहेको छ । प्रतियोगिताले अब अन्तराष्ट्रिय स्तरको आकार लिइसकेको छ । अब छिटै हामी दक्षिण एसियाली स्तरको बनाउने सोचका साथ अगाडी बढेको छौं । र यो पुरा पनि हुनेछ । तर त्यसका लागी हामी एक्लैको प्रयासले मात्र हुदैन । सबैको साथ र सहकार्य भएमात्र देशलाई चिनाउने प्रतियोगिता गर्न सकिन्छ ।
यसैगरी पत्रकार महासंघ बाँकेका पुर्व अध्यक्ष झलक गैरेले मिडियाको तर्फबाट प्रतियोगितालाई सफल बनाउन सहयोग गर्ने बताए ।
कार्यक्रममा पत्रकार महासंघ बाँके अध्यक्ष ठाकुर सिह थारुले नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले बिशेष चासो लिनुपर्ने र अन्य स्थानीय तहले पनि अपनत्व लिनुपर्ने बताए । नेपाल पत्रकार महासंघका निर्वतमान सदस्य जनक नेपाल, सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघ सदस्य तुला अधिकारीले पनि प्रधानमन्त्री कपलाई सबैको साझा बनाउने आयोजकले गरेको प्रयास सराहनीय रहेको चर्चा गरे ।
प्याब्सन बाँके अध्यक्ष डा. राजेश केशर खनालले सम्पुर्ण विद्यालयको सहयोग रहने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे । एनब्याप्सन केन्द्रिय केन्द्रिय उपाध्यक्ष बामदेव न्यौपानेले एनप्याब्सन अन्तर्गतका सबै विद्यालयलाई सहभागिता गराउन पहल गर्ने बताए । हिसान बाँके अध्यक्ष डा. अरबिन्द मिश्र लगायतले प्रतियोगितालाई सफल पार्न आफुले कुनै कसर बाँकी नराख्ने प्रतिवद्धता जनाए । पुस्तक तथा स्टेसनरी व्यवसायी संघका बसन्त लामिछानेले सबैले साझेदारी र सहकार्यको संस्कारले कार्यक्रम सफल हुने बताए । केवल व्यवसायी विनोद अग्रहरीले प्रतिष्ठित उद्योगी व्यवसायीलाई प्रधानमन्त्री कपसँग जोड्न आफुले सार्थक पहल गर्ने बताए ।